Kugadzirwa Heating Copper Wire Kwekutambanudza Ne induction kupisa muchina
musha / Applications / Induction Heating / Induction Kuchenesa Mhangura Wire yeKubvisa
Category: Induction Heating Tags: yendarira inobvisa waya, mhangura wendarira, yendarira waya yekudziya system, yendarira waya inobvisa induction, induction kupisa yemhangura waya, induction Heating stripping waya, kubvarura waya induction heater
Induction Inopisa Muchuni Wechipfu Inopinza neHigh Frequency Heating Equipment
Chinangwa Kupisa tambo dzemhangura dzisati dzaiswa tini dzakasiyana siyana kusvika pa500 ° F (260 ° C) kuti inyungudise tini uye nekubatanidza (fiyuzi) tambo kuti dzive nyore kubvisa
Zvinyorwa Zvakatemerwa tambo dzendarira 0.01mm muhupamhi
Kupisa 500 ° F (260 ° C)
Kakawanda 900 MHz
Zvishandiso DW-UHF-4.5KW solid state induction magetsi inowirirana neiri kure kupisa chiteshi ine matatu zana pF ma capacitor ezere mazana 100 pF.
Iyo yekumisikidza-yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanangana neichi chishandiso (ona mufananidzo).
Maitiro A akawanda-anotendeuka induction Heano coil inoshandiswa kupisa aya akasiyana waya ma sampuli. Iyo ceramic chubhu inoiswa mukati meiyo coil kuti iite senongedzo yetambo uye kuisa pakati tambo, kudzivirira
arcing mune coil. Pakutanga kuyedzwa kunoitwa kuti uve nechokwadi chekuti wega tambo dzemhangura dziri kudziya kune chaiyo tembiricha. Izvo zvakatemwa kuti tambo dzinogona kudziirwa kuti dzinyungudike uye dzibatanidze iyo
mhangura mu 1-2 masikati paizvi nguva
Mhedzisiro / Bhenefiti Iyo DW-UHF-4.5KW Induction Heating system inodziya akasiyana siyana dhayamita waya kusvika 500 ° F pamutengo wakatarwa. Iyo imwechete sisitimu inoshanda pane imwechete tambo yakasungirirwa tambo pamwe nekaviri-tambo tambo tambo musangano. Kusvikira ku20 kW yemagetsi pa400 kHz haigone kupisa tambo diki dzemhangura.